प्रधानमन्त्रीज्यु, जीवन र मृ''त्युको दोसाँधमा हुँदा तपाईंले मृगौला नपाएको भए के हुन्थ्यो ? - Visualnepal
प्रधानमन्त्रीज्यु, जीवन र मृ”त्युको दोसाँधमा हुँदा तपाईंले मृगौला नपाएको भए के हुन्थ्यो ?
काठमाडौं- विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गम्भीर प्रश्न सोधेका छन् । उनले मृगौला नपाएर छट्पटीएको भए कस्तो हुन्थ्यो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
बिहीबार एक भिडियो सन्देशमार्फत मिश्रले मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने समयमा मृगौला नपाएको भए कस्तो हुन्थ्यो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । देशभर अक्सिजनको अभावका कारण मानिसको मृत्यु हुन थालेको अवस्थामा मिश्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।
उनले भनेका छन्,‘यदि तपाईंको मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने समयमा मृगौला नपाएको भए तपाईं र तपाईंको परिवारलाई कस्तो महसुस हुन्थ्यो ?, हो त्यसैगरी आज सैयौं नेपालीहरू जीवन र मृ”त्युको दोसाँधमा अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहेका छन् र धेरैको मृ”त्यु पनि भइसकेको छ ।’
देशभर अक्सिजन अभावको हुनुको मुख्य कारक सरकार भएको आरोप लगाउँदै निजी अस्पताललाई १५ दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट लगाउन निर्देशन दिनु हास्यास्पद र मुर्खता भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सरकारले गर्न नसक्ने काम निजी अपतालले कसरी गर्नसक्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
यस्तै मिश्रले तुरुन्त मित्रराष्ट्रहरू सम्वाद गरेर अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको लागि सहयोग माग्न सुझाव दिएका छन् । देशभर शय्याको अभाव भएको अवस्थामा सेना र प्रहरीको सहयोग लिएर देशभर शय्या र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
मिश्रले देशभरका सम्पूर्ण गरिब जनताले निःशुल्क उपचार पाउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिँदै देशभरका नागरिकप्रति अपरा;”ध नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनी म बाट धेरै टाढा छिन ” आमा ”
त्यो दिन नपर्खौ…….
सन् २०२० लाई फर्केर हेर्दा …..
ओलीले भने– मैले बोलाएको बैठक मात्र आधिकारिक हुन्छ